Iwo Akanaka Kwazvo Vegeta Anodhirowa Dhiraidhi Bhora Z Fans Vachakoshesa - Zvimwe
22+ Vegeta Quotes Dhiragoni Bhora Z Fans Vachakoshesa
“Benzi robhoti. Iwe unonyatsofunga iwe une mukana kupokana neSuper Saiyan seni? Uropi hwako hunofanira kunge husiri kushanda zvakanaka. ” - Muriwo
Ingo 1 google yekutsvaga ye 'Vegeta' inounza pamusoro pe25 mamirioni mhedzisiro. Kuratidza yakakurumbira sei Vegeta iri munyika yeAnime.
Iye anozvitutumadza, jongwe, asi akangwara, akangwara, uye kugona kukuru. Uye nyanzvi, zvakare.
Kunyangwe hazvo akawanda makotesheni eVegeta ari kuseka, kune mamwe maVheji eVegeta ane hungwaru uye anokurudzira.
Ndiyo mhando yemurume iye kana iwe uchifunga nezvazvo.
chii chidimbu chehupenyu anime
Ngatitarisei zvimwe zve Mitsetse yakanakisa yeVegeta mu Dragon Bhora Z / DB Super.
“Ini handityi dambudziko idzva iri. Asi semurwi wechokwadi ndichasimuka kuti ndisangane nazvo. ” - Muriwo
“Simba ndicho chega chinhu chakakosha pasi rino. Zvimwe zvese ingori fungidziro kune vasina simba. ” - Muriwo
'Usambotumira mukomana kuti aite basa remurume.' - Muriwo
“Pane chokwadi chega muhupenyu. Murume akasimba anomira pamusoro uye anokunda zvese! ” - Muriwo
'Unogona kutora kutonga kwepfungwa dzangu nemuviri wangu, asi pane chinhu chimwe chete Saiyan anogara achichengeta… KUDADA kwake!' - Muriwo
'Handimbofa ndakakupa masekisiti asinganzwisisike!' - Muriwo
“Ndingarega sei izvi zviitike kumwanakomana wangu? Akabaira zvese nekuda kwangu! Uye hapana chandakaita kunze kwekumufuratira! ” - Muriwo
“Nguva dzese pandinosvika padanho idzva resimba, simba rakakura rinoratidzika kupokana nesimba rangu. Zvinoita sekunge ramangwana riri kundiseka nekuseka kukuru, sezvakaita Kakarot. ' - Muriwo
“Kakarot… Ndapota… Paradzai Frieza… Akandiita zvandiri… Musadaro… regai iye… azviite… kunaani zvake. Chero zvazvingava… Mumisa iye… Ndapota. ” - Muriwo
“Zvidembo, Bulma, ndiri kukuitira izvi. Uye hongu, kunyange iwe, Kakarot. ” - Muriwo
“Hakuna chinhu chinonzi kurongeka kana kusaruramisira muhondo. Kune kukunda chete kana kwauri, kukundwa. ” - Muriwo
“Rukudzo rwako ruripi? Kunge maSaiyans ese ane ropa rakachena, Kakarot angatofa kufa achirwa pane kukunda kuhwina imwe yeanonyadzisa senzu bhinzi semubato wake! Kakarot akadzidziswa muiyo hyperbolic nguva kamuri sezvatakaita isu. Zvino ngatione zvaangaite! ' - Muriwo
“Kunyange varwi vane simba vanotya. Chinoita kuti vave murwi wechokwadi kushinga kwavanako kuti vakunde kutya kwavo. ” - Muriwo
'Pusha kuburikidza nemarwadzo, kurega kunorwadza zvakanyanya.' - Muriwo
'Kwete, handikwanise kurasikirwa!' - Muriwo
“Chii chakaipa Frieza? Uropi hwako ndehumwe hwemhasuru dzako dzakashomeka uye dzakashandiswa here? ” - Muriwo
'Zvidhoma, handina kumbokumbundira semucheche ... rega ndikumbundikire.' - Muriwo
“Rega ndikubvunze. Muchina wakaita sewe unombotya here? ” - Muriwo
'Kakarot, unonakidza chaizvo. I never stood a chance against Buu, ndiwe wega unogona kumurwisa. Ndinofunga ini pakupedzisira ndinonzwisisa kuti shasha yakaita seni haigone kukupfuura. Ndakafunga kuti imhaka yekuti waive nechimwe chinhu chekudzivirira. Ini ndaifunga kuti yako dhiraivhira inokubvumira kuti utore mukana wezvaunogona… ichi chingave chiri chikonzero, asi kwete neniwo ndine dhiraivha iyi. Ndakarwa kuti ndiite zvandaida, nekuti zvainakidza kuuraya vavengi vangu uye kufudza kuzvikudza kwangu. Asi akasiyana, anorwira kuti asahwine asi nekuti haatombokundwa, zvichimuita kuti atyore miganho yake uye haana hanya kuti ndiani anopikisana naye. Saka paakange asina kundiuraya, zvaive nekuti akaona kuti ndinogona kuchengeta vamwe, sezvandiri kuita izvozvi… Enda Kakarot, ndiwe nhamba yekutanga! ” - Muriwo
“Ndinozviona zvakaoma kutenda kuti masero angu ari mumuviri wako. Iwe ungadai wakaita sei kuti uve wakashata kudaro? Kutambisa kwakadii. 'Zvisinei, zviri pachena kuti wawana kupi simba rako rose.' - Muriwo
“Akandirova chose. Kutanga nemaitiro ake ega uyezve kuburikidza nemwanakomana wake. Uye chii chaakandisiira pano? Sei? Ungafa sei zvakadaro? Sei, Kakarot? Handimbofi ndakawana mukana… kuratidza simba rangu kukurwisa. Wakafa usina kutya. Chii chinoita kwandiri? Ini handisi murwi. Uye handichazomborwazve. ” - Muriwo
'Wagadzirira izvozvi kupupurira simba risingaonekwe kwezviuru zvemakore?' - Muriwo
Ndeapi maVegeta makotesheni aunonyanya kufarira?
ndakataridzika sei mudiwa anime
27+ HURU Dragira Bhora Z T Shirts Yako Wadhirobe
60 YeChikuru Dhirauko Bhora Z Zvinyorwa ZveZVINHU Nguva
Iyo Yakanyanya Ngano Fairy Tail Quotes
unoita muchina wakafanana newe unonzwa kutya
runyorwa rweakanakisa anime akateedzana ekuona
chidimbu chakanaka chehupenyu kudanana anime